Furaha iPhone ee ugu dheer adduunka | Wararka IPhone
Sirta iPhone ee adduunka ugu dheer
Sida inbadan oo naga mid ahi ogtahay, Apple ayaa loo oggol yahay iOS 9 imaatinka nambarro waaweyn oo quful, si loo hagaajiyo amniga uu qufulka afarta lambar na siiyo. Si kastaba ha noqotee, marwalba waannu kashifmi doonnaa, hadday ahaan lahayd saaxiibbadayada ugu dhow ama qoyska, iyada oo loo marayo lammaanaheena, marwalba waxaa jira qof garanaya xeerarkeenna. Laakiin ugu dambayntii, marba haddii uu sii dheeraado lambarkayaga sirta ah, ayaa ka sii adkaanaysa in la dillaaco. Tan sifiican ayaad u ogtahay isticmaale Jabaaniis ah oo macruuf ah, oo haysta waxa loo aqoonsaday inuu yahay lambarka ugu dheer adduunka ee iPhone illaa hadda, oo lagu duubay fiidiyoow intii lagu jiray safarka tareenka dhulka hoostiisa mara taasna waxay ku dhacday fayras si la yaab leh waxayna ku soo kordheysaa shabakadda. Xaqiiqdii way adag tahay in la helo lambarka saxda ah xitaa adoo joojinaya fiidiyaha.
Waxyaabaha cajiibka ah ma aha oo kaliya xaqiiqda ah in koodhku si madax-bannaan u dheer yahay oo Jabaanku si qumman u xusuusto (in badan baa ka maqnaan lahaa, ayuu yidhi), waa xawaaraha uu farahiisa kaga siibay shaashadda si uu ugu galo xiiso leh 11 ilbidhiqsi oo furayaasha ah. Ninkani waa mid caan ah oo furayaasha furayaasha ah, shaki la'aan. Waxay ila tahay shaqsiyan nacasnimo madaxbanaan, in aan yeesho koodh sidan u dheer, waayo dhibaatooyinka qufulka iyo furitaanka qalabka, Uma arko wax faa'iido leh oo loo maro dhibaatadaas mar kasta oo aan dooneyno inaan kaga jawaabno farriin "OK" fudud.
Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in Jabbaaniga su'aasha laga qabo uu leeyahay iPhone 4S ama iPhone 5, shaki la'aan eheladiisa haddii ay garanayaan isaga waa inay tixgeliyaan inay siiyaan iPhone 5S wixii ka dambeeya, qalab kasta oo leh Aqoonsiga taabashada, maadaama farahaagu aad kuugu mahadcelin doonaan, lagana yaabo maskaxdaada sidoo kale, wax ka badbaado badan farahayaga gaarka ah, oo waxay badbaadin doontaa Aasiyahan aan cabsanayn waqti aad u badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Sirta iPhone ee adduunka ugu dheer
Heerka Aasiya dijo
Ku soo jawaab heerka Aasiya
Hadday sidaa u dheer tahay (furaha sirta ah) waxay noqon doontaa maxaa yeelay wax bay badbaadineysaa, waxaan la yaabanahay waxa khasab ku ah inay ahaato hahaha NSAproof password
Ki ero a votraceña loogu talagalay koontada iiplone
U jawaab ilmaha
Barnaamijka Mooverang waa la cusbooneysiiyay si aad si fiican uga maamuli karto kharashyadaada iPhone-ka
Auxo hadda waa la jaan qaada macruufka 9